Work Safety | BCAL
BCAL သည် Australian Safe-T Training မှ တင်ပြသော လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး လက်မှတ်များစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
ယခုအချိန်တွင် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးပါက သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် အစီအစဉ်မရှိပါက၊ ဤသင်တန်းများသည် သင့်အတွက်မဟုတ်ပေ။
CPCCWHS1001 ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ဘေးကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်ပါ။
White Card ဟုလည်းလူသိများသော၊ ဤသည် မည်သည့်အဆောက်အအုံဆိုက်တွင်မဆို ခြေချလိုသူတိုင်းအတွက် နိုင်ငံအလိုက်အသိအမှတ်ပြု OH&S မိတ်ဆက်သင်တန်းဖြစ်သည်။
ကြာသပတေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀
မနက် ၉း၃၀ မှ ၃း၃၀ ထိ
သောကြာနေ့၊ မတ်လ 25*
ကုန်ကျစရိတ်- $160 ($150 conc.)
*ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားထားပါ၊ မတ်လရက်စွဲသည် Feb ရက်ပြီးဆုံးသည် သို့မဟုတ် ပြည့်ပြီးနောက်မှသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
RIIWHS205E သည် ရပ်တန့်-အနှေးရိုက်တံဖြင့် အသွားအလာကို ထိန်းချုပ်ပါ။
RIIWHS302E ယာဉ်အသွားအလာ စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
Stop-Slow bat နှင့် မှန်ကန်သော ဆိုင်းဘုတ်များ အပါအဝင် ဘေးကင်းသော ယာဉ်ကြောထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ ပါဝင်သည်။ မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ကောင်စီများနှင့် Vic Roads တွင် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် သောကြာနေ့
မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ
သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ 1 ရက်*
ကုန်ကျစရိတ်- $180 ($170 conc.)
*ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ၊ ဧပြီလရက်စွဲသည် Feb ရက်စွဲပြီးသည် သို့မဟုတ် ပြည့်ပြီးနောက်မှသာ ရနိုင်ပါမည်။
Australian Safe-T Consulting Services RTO: 21852 မှ ပို့ချသော အလုပ်ဘေးကင်းရေး သင်တန်းများ
"Enter Hair" Wonthaggi တွင် "Enter Hair" Wonthaggi တွင် ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်ညှပ်သင်တန်းကို အမှန်တကယ်စတင်သောအခါတွင် Salon လက်ထောက်သင်တန်းတွင် Certificate II ကို ပြီးမြောက်ရန် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုလုပ်ပါ၊ "အရောင်ပိုလှပြီး ဖြတ်တောက်ခြင်းအလေ့အကျင့်"။ သင်တန်းပြီးသွားလို့ အရမ်းလိုချင်တဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်လို့ အရမ်းပျော်ပါတယ်။
WSC မှ Brooke Thatcher